Waa maxay sababta Suuqgeynta Waqtiga-Xiga ay Muhiim ugu noqotay Xilliga COVID | Martech Zone
Waa maxay sababta Suuqgeynta Waqtiga-Xiga ay Muhiim ugu noqotay Xilliga COVID
Sabtida, Oktoobar 10, 2020 Isniin, Janaayo 18, 2021 Hannah O'Brien
Waxaa laxaqiijiyey in sanadki sanadki dhaweyd ee Super Bowl uu ubaahan yahay kor 11 milyan kilowatt-saacadood awood u leh inuu socodsiiyo ciyaarta bilowga inuu dhammeeyo. Nooca fudud ee 'Oreo' wuxuu sugayay ku dhowaad laba sano xilligan markii dhammaan 11 milyan oo kiiwaat-saacadood oo awood ah ay si guul leh u socon lahayd oo ay jiri lahayd mugdi; kaliya waqtiga loogu talagalay astaanta inay fuliso xariggooda.
Nasiib wanaag shirkadda cookie-ka, sanado ka hor Super Bowl XLVII, ugu dambeyntii waxaa jiray cilad koronto oo keentay koronto la'aan garoonka. Oreo waxay guji dirtaa wixii ay diyaariyeen Tweet oo sugay hawlgelinta.
Koranto? Dhib malahan. pic.twitter.com/dnQ7pOgC
- Cookie OREO (@Oreo) February 4, 2013
Dhamaadka habeenka Axada, Oreo's Twitter-kiisa wuxuu aqbalay kudhowaad 8,000 oo raacsan waxaana dib loofiiriyey kudhowaad 15,000 jeer, koontadooda Instagram ayaa ka tagey inay haystaan ​​2,200 oo taageerayaal ah iyo in kabadan 36,000, oo helay ku dhowaad 20,000 oo jecel Facebook. Ugu dambeyntiina, istiraatiijiyadda Oreo waxay ahayd mid guuleysata waxayna muujisay hanaan la yaab leh oo loogu talagalay suuq-geynta waqtiga-dhabta ah.
Suuqgeyn inta lagu gudajiray COVID-19
Waxaa jira siyaabo badan oo ganacsiyada ay uga sii gudbi karaan dhiirrigelinta iyo iibinta wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, hal dariiqo oo ay tahay in laga fiirsado ayaa ah suuq-geynta waqtiga-dhabta ah, gaar ahaan maxaa yeelay waa hab xariif ah oo ku saabsan sida ay suuqyadu uga jawaabi lahaayeen Coronavirus.
Laga soo bilaabo tusaalaha kore iyo soo bandhigida sharaxaad qoto dheer, suuq-geynta waqtiga-dhabta ah waa ficil shirkadeed oo si deg deg ah uga jawaabeysa dhacdo hada socota iyada oo loo marayo bayaan, faallo, ama ficil ujeedada ah helitaanka aragti, taraafikada, ama iibka.
Warbixinadu waxay muujiyeen in xogta waqtiga dhabta ah ay ka mid tahay top 3 hababka suuqleydu sheegeen in la hagaajiyay oo lagu daray qiimaha xeeladahooda. Hadda oo COVID-19 ay nolosheena ku sugan tahay mustaqbalka la saadaalin karo, ku darista suuq-geynta waqtiga-dhabta ah inta lagu guda jiro xiisadda istiraatiijiyadda ganacsigaaga waxay hagaajin kartaa xiriirka ka dhexeeya astaantaada iyo kuwa raacsan, iyo sidoo kale kobcinta sumcadda shirkaddaada.
Gaar ahaan, shirkadaha waaweyni waxay guranayeen faa'iidooyinka suuq-geynta waqtiga-dhabta ah inta badan sababtoo ah joogitaanka ballaaran ee ay horeyba ugu haysteen adduunka dhijitaalka ah. Markay ganacsi sidan oo kale ah soo saarto farriin falcelin dhacdo ama mushkilad taagan, dhagaystayaasheeda waaweyn waxay awood u leeyihiin inay fariinta la wadaagaan kuwa raacsan, guud ahaanna waxay ka caawiyaan shirkadahaan inay ballaariyaan gaadhitaankooda xitaa ka sii fog sidii ay horeba ugu lahayd dabiiciyan dabiici ah hab.
Iyada oo laga jawaabayo tan, ganacsiyada yaryar waa inay bartaan inay ku dhejiyaan xeeladaha shirkadaha waaweyn, ha ahaato qaab faallo ku saabsan qoraalladooda ama dib u soo celinta waxyaabaha ay ka kooban tahay si ay u soo jiitaan shirkadaha waaweyn ee dhagaystayaasha jira.
Talooyinka Suuqgeynta Waqtiga-dhabta ah
Guud ahaan way u fududahay shirkadaha waaweyn inay abuuraan guul xeeladaha suuq-geynta waqtiga-dhabta ah si loo ballaariyo gaadhitaanka ay la leeyihiin dhagaystayaasha horeba u jiray, halka ganacsiyada yaryar ay u baahan doonaan inay qaadaan habab kala duwan si ay uga caawiyaan kor u qaadista naftooda. Iyadoo ay weheliso barashada iyo raacitaanka qaababka ay abuureen ganacsiyada aasaasiga ah, hoosta waxaa ku yaal talooyin faro-ku-tiris ah oo la tixgelinayo marka la abuurayo istiraatiijiyad-ganacsi-ganacsi dhab ah oo ganacsi u gaar ah:
Ku Joog Muuqaalka - Hal daqiiqo dhacdo ayaa is bedbedeli karta tan xigtana waxay durba ku sii socotaa hoos u dhac. Shirkaddaadu waxay u baahan doontaa inay feejignaan sare ku jirto haddii ay rabto inay si guul leh u fuliso suuq-geynta waqtiga-dhabta ah. Tan waxaa ku jiri kara dejinta digniinta Google ama aaladaha kale ee digniinta wararka ee mowduucyada gaarka ah ee ganacsigaagu rabo inuu daboolo. Tani waxay kaa caawin doontaa in astaantaadu noqoto tii ugu horreysay ee lagu wargeliyo xaaladaha iyo dhacdooyinka cusub. Hab kale ayaa raacaya saamileyaal ama shirkado kale oo ka shaqeeya goobtaada kuwaas oo ka hadlaya mawduucyo la mid ah ganacsigaaga. Haddii aadan awoodin inaad qabato wararkii ugu dambeeyay, waxaa macquul ah in qof aad daba socoto uu qabto; walina waxaad fursad uheli doontaa inaad dhaqso wax uga qabato istiraatiijiyad suuqgeyn kuu gaar ah.
Hayso Kheyraad - Shirkaddaada haysata agabyada la diyaariyey waa mid caqli badan marka la suuqgeynayo inta lagu jiro COVID-19. Way adkaan kartaa iyadoo dabeecadaha macaamilku ay had iyo jeer isbedelayaan marka laga jawaabayo arrimahan, laakiin haysashada waxyaabo diyaar u ah inay tagto waxay kaa caawin doontaa inaad ku guuleysato istiraatiijiyaddaada dhabta ah ee suuq-geynta, sida Oreo horay u muujiyey.
Ka qaybgal - Haddii shirkaddaadu go'aansato inay kaqaybqaadato suuqgeynta waqtiga-dhabta ah, waa inaad sidoo kale diyaar u noqotaa inaad lashaqeyso dhagaystayaashaada oo ay u badan tahay inay ka jawaabaan kana falceliyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay. Tusaale ahaan, haddii meheraddaadu go'aansato inay abuurto qoraal ku saabsan sida ay u maareynayso cudurkan faafa iyo taxaddarrada nabadgelyada ee jirta, sidoo kale waa inaad u diyaargarowdaa inaad ka jawaabto su'aalaha macaamiisha ee la xiriira bayaannadaada maxaa yeelay tani waxay abuuri doontaa kalsooni u dhexeysa sumaddaada iyo macaamiishaada.
Hal abuur samee - In kasta oo COVID-19 saamayn ku leeyahay e-commerce markii ugu horreysay ee ay bilaabatay, haddana waxay noqotay waqtigii ganacsatadu ay abuuri lahaayeen hal-abuurnimo ayna la imaan karaan istiraatiijiyado cusub sida qaybinta waxyaabaha fiidiyowga ah si loo soo jiito macaamiisha. Shirkaduhu hadda waxay fursad u leeyihiin inay muujiyaan shakhsiyaddooda oo ay macaamiisha ku gaarsiiyaan heer qoto dheer. Hadday tahay kaftan caqli-gal ah ama u damqasho dhibaato, u sameynta codka astaamahaaga ayaa kugu xiri kara naftaada dhagaystayaashaada.
Ganacsiyadu waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan talooyinkan markay samaynayaan istiraatiijiyaddooda ganacsi. Waa inay sidoo kale ka digtoonaadaan caqabadaha la yimaada habkan maxaa yeelay suuq-geynta waqtiga-dhabta ah inta lagu gudajiro COVID-19 way adkaan kartaa in la fuliyo iyada oo aan laga helin falcelin deg deg ah, xogta la heli karo, iyo aqoon la xaqiijiyay oo ku saabsan mowduuc.
Macaamiisha, natiijo ahaan, waxay kudhamaadeen kalsoonida iyo daacadnimada magacyada soo saaray waxyaabo aan sax ahayn oo ku saabsan arrimaha culus. Sumaddaada gaarka ah waxay u baahan tahay inay ku sameyso cilmi baaris sax ah dusha sare ee si dhakhso leh u soo saarista waxyaabaha haddii ay rabaan istiraatiijiyadooda inay guuleystaan
Xogta waqtiga-dhabta ah waa mid muhiim ah
Tirakoobyo iyo macluumaad cusub ayaa soo baxa maalin kasta oo ku saabsan COVID-19, iyagoo si joogto ah ganacsatada u siiya fursad ay kaga faa'iideystaan ​​xeeladaha suuq-geynta waqtiga-dhabta ah. Tani waa dhibaato ay tahay inaysan shirkadaha iska indhatirin si ay gacan uga geystaan ​​dhisida xiriiro lala yeesho dhagaystayaashooda oo socon kara muddo dheer ka dib marka saameyntu yaraato. Gebogebadii, suuq-geynta waqtiga-saxda ah ee saxda ah wuxuu ugu dambeyntii u horseedi karaa natiijooyin wanaagsan inta lagu jiro xaaladda gacanta.
Tags: COVID-19suuqgeynta suuqgeyntatallooyinka suuqgeyntaOreoxogta waqtiga-dhabta ahsuuq-geynta waqtiga-dhabta ahxeeladaha suuq-geynta waqtiga-dhabta ahwarbaahinta bulshadaTwitter
Hannah O'Brien waxay u qortaa wakaaladda suuq geynta dijitaalka Aumcore, oo ku takhasusay soo saarista khibradda ugu horreysa ee dijitaalka ah oo lagu lammaaneeyay qorshaha suuqgeynta waxyaabaha ugu sarreeya.
Freshsales: Soojiid, Hawlgal, Xir, iyo Hormarinta Hormarinta Ganacsigaaga Hal Madal Iibineed
Maareynta Maareynta Nolosha ee 'Conga Contract': Lagu Hormariyo Waxtarka Iibinta Iyadoo La Qaadayo Dukumiintiga Aaladda Shaqada